kml to dxf - त्यो रूपान्तरण गर्ने पाँच तरिकाहरू - Geofume
kml to dxf - त्यो रूपान्तरण गर्ने पाँच तरिकाहरू
जनवरी, 2009 गुगल अर्थ / नक्सा, GvSIG
केही समय पहिले त्यहाँ व्यावहारिक अनुप्रयोग थियो Zonums को मित्र कि धेरै बाधा बिना यो समारोह गरे (dxf to किमी)। दुर्भाग्यवश, मित्रले धेरै सामरिक थियो जब उसले म्याद समाप्त हुने मिति सिर्जना गर्‍यो, जब कि हालै जब उसले यसलाई खोल्छ, ऊ भन्छ कि यो पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको छ; ऊ इजाजतपत्र बेच्न धेरै सम्भावना छ ... ब्ला ब्ला ब्लाह।
ठीक छ, हामी के चाहन्छौं कि केएमएल फाइलहरू dxf ढाँचामा CAD सम्पादक जस्तै AutoCAD वा Microstation प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न।
पहिलो टिप: अविश्वसनीय अनावश्यक नगर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने प्रोग्राम छैन, त्यसैले तपाइँसँग एक अतिरिक्त अनुप्रयोगमा सहभागी छैन।
केसका लागि, धेरै गुनातपाईंले भर्खर केमीएल कल गर्नुपर्नेछ, यसलाई प्रोजेक्सन तोक्नुहोस् जुन हामी यसलाई निर्यात गर्न चाहन्छौं र यसलाई dxf मा पठाउनुहोस्। २ simple245 डलर को लागी यति सरल।
उस्तै, अर्को आर्थिक विकल्प हो ग्लोबल मेपर, जो $ 299 को लायक छ।
यदि यी प्रोग्रामहरू जुन $ 300 भन्दा कम मूल्यको हुन् भनेर यो सजिलो बनाउँछ, यो शायद सम्भवतित व्यावसायिक GIS कार्यक्रम हो जुन तपाईंले पहिले नै प्रयोग गर्नुहुनेछ।
दोस्रो टिप: यसलाई सजिलो बनाउनुहोस् र समुद्री डाकू नगर्नुहोस्।
यस अवस्थामा, हामी यो gvSIG सँग गर्नेछौं, यसको फायदा लिन नि: शुल्क इजाजतपत्रको फाइदा लिनु र ArcView 3x प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आत्म-सिखाएको जुनूनको केहि घण्टामा आधारभूत प्रयोग गर्न सिक्नु पर्छ।
तेस्रो टिप: मलाई पढ्न रोक्नुहोस्, बस गर्नुहोस्।
पाँच चरणमा dxf किलोमिटरमा
1। GvSIG खोल्नुहोस्
यो gvSIG १.1.9 अल्फा वा १ build निर्माण भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ, किनभने अघिल्लो स्थिर संस्करण १.18 ले किमीएल फाइलहरू खोलेका थिएनन्। gvSIG हुन सक्छ डाउनलोड गर्न तपाईको पृष्ठको, र यहाँ म तुलना गरेको थियो यस संस्करणको केहि फाइदाहरू जुन हामी आशा गर्छौं छिट्टै gvSIG 2.0 को रूपमा स्नातक हुनेछ
2। दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्
एकपटक तपाइँले gvSIG प्रविष्ट गर्नुभएपछि, परियोजना प्रबन्धकमा विकल्प "दृश्य" छान्नु भएको छ र नयाँ दृश्य सिर्जना गर्न बटन थिचिएको छ।
तपाईं यसलाई छोएर यो नाम दिन सक्नुहुन्छ र «नाम बदल्नुहोस्» बटन प्रयोग गरेर, मेरो केसमा मैले यसलाई «Cadastral called बोलाएको छु। गुणहरूमा दृश्यका लागि अपेक्षित प्रोजेक्शन कन्फिगर गरिएको छ (व्यक्तिगत आकारहरूको लागि होईन)
3। दृश्य खोल्नुहोस्
दृश्य खोल्नको लागि यसमा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस् वा दायाँ प्यानलमा "खोल्नुहोस्" बटन थिच्नुहोस् र थिच्नुहोस्। यसले किलोमिटर लेयर खोल्नुपर्दछ, यससँग भएका सुविधाहरू अनुसार, तपाईं धेरै दृश्यहरू र लेयरहरू खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईं चाहानुहुन्छ अर्कभ्यू तहहरू पनि।
4। किलोमिटर खोल्नुहोस्
एक पल्ट दृश्य खोलिएको बेला, किलोग्राम तहमा थप्न बटनमा लोड हुन्छ। चालक प्रकार kml चयन गरिएको छ, र फाईल खोजिएको छ (यो kml वा kmz हुन सक्छ)।
यदि तपाइँ हेर्नुभयो भने, यो कल गर्न सकिन्छ dgn, dwg, dxf, shp अन्य बीच। तल्लो भागमा प्रक्षेपण विन्यास गरिएको छ।
5। यसलाई dxf मा निर्यात गर्नुहोस्
यसलाई निर्यात गर्न, तह छुनुहोस्, त्यसपछि "तह / निर्यात" विकल्प छान्नुहोस् र त्यसपछि dxf रोज्नुहोस्।
यो दिलचस्प छ कि gvSIG ले kml देखि एसपीपी र यसको विपरीत बनावट को पनि रूपांतरण गर्दछ।
चौथो टिप: तपाईंको मनपर्ने सफ्टवेयर नमान्नुहोस्।
भवदीय, यी दैनिक दिनहुँ हाम्रो ठूलो जीआईएस कार्यक्रमहरूलाई उनीहरूको द्रुत कार्यक्षमता लागू गर्नको लागी बलियो हुनसक्दछ।
अन्य4तरिका dxf (kml देखि dxf) को kml फाईलहरू कन्वर्ट गर्ने तरिकाहरू:
ArcView DGN DWG gvSIG ओएस KML kml देखि dxf मितोल्ड GIS SHP
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो पहलहरू बढाउँदै: DielmoOpenLiDAR
अर्को पोस्ट तेल नक्शाअर्को »
4 "dxf मा kml - रूपान्तरण गर्न पाँच तरिकाहरू" लाई जवाफ।
मसँग केहि SHP फाईलहरू थिए र अन्तमा म तिनीहरूलाई DXF मा परिवर्तन गर्न सक्दछ यस प्रोग्रामलाई धन्यवाद। मैले अझ धेरै सम्भावनाहरू देखेको छुईन, तपाईंसँग समय भएपछि म अलि बढि अनुसन्धान गर्नेछु। अहिलेको लागि, सुपर !!!
निश्चित तपाईं एक गैर-आखिरी संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
यो आलेख 2009 को जनवरी बाट हो, तर हालको मितिमा त्यहाँ gvSIG को नयाँ संस्करणहरू छन् जुन यसले पहिले नै समस्या समाधान गरेको हुनुपर्छ।
नमस्ते तिमी कसरी हो?
म मारियो को लागी एक नै समस्या छ, म निम्न त्रुटि प्राप्त गर्दछ "प्रयोगकर्ताद्वारा समात्ने छैन" र लेयरमा क्रससँग रातो चिन्ह देखा पर्दछ, यो कार्यक्रम जुन मैले लिङ्कबाट डाउनलोड गरेको छु फरक फरक छ, के मेरो विश्वास छ के लागि अद्यतन,
त्यहाँ अर्को तरिका हो ?? केहि अन्य कार्यक्रम ??
धन्यवाद र उत्कृष्ट पृष्ठ
नमस्कार यो कसरी जाँदैछ
मैले सफलता बिना एक किमी वा किमी खोल्न प्रयास गरें। जब म प्रयास गर्दछु म निम्न त्रुटि सन्देश पाउँछु: "त्रुटि प्रयोगकर्ताले खिच्दैन" र विवरणमा ट्रान्सक्रिप्ट गर्न असम्भव धेरै सन्देशहरू।
म के गरिरहेको हुन सक्छु?
नमस्कार र यो जारी राख्नुहोस्।